ललितपुरमा क्यान्सर रोग परिक्षणका लागि स्वास्थ्य शिबिर – रियलपाटी
ललितपुरमा क्यान्सर रोग परिक्षणका लागि स्वास्थ्य शिबिर
Posted on September 7, 2019 Author real pati	Comment(0)
ललितपुर । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले आफ्नो ३७ औं वार्षिकोत्सबका अबसरमा शनिबार ललितपुरमा वृहत स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
सहिद धर्मभक्त स्कुल नख्खुमा महिलाहरुको पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोग परिक्षण आयोजना गरेको हो । शिबिर नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका अध्यक्ष लोकेन्द्र कुमार श्रेष्ठले संस्थाले आफ्नो ३७ औं स्थापना दिवसकका अबसरमा हरेक वर्ष झै यस बर्षपनि सर्वसाधारणको स्वास्थ्यवस्थालाई ध्यानमा राखि स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको बताए ।
उनले यस कार्यक्रमबाट क्यान्सर के हो र यसबाट बच्नका लागि गर्नुपर्ने उपायहरुकाबारे महिलाहरुलाइ जानकारी दिने उदेश्यकासाथ शिबिर आयोजना गरेको जानकारी दिए । संस्थाले आफ्नो ४५ वटा जिल्ला शाखाहरु मार्फत यस किसिमको कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिदै आएको बताए । संस्थाले क्यान्सर रोगबाट बच्न आफ्नो दैनिकी जीवन लाई परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा यस रोग बाट बच्न सकिने हुँदा आफ्नो खानपिनमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष श्रेष्ठले यस कार्यक्रमलाई निरंतरता दिदै आइ रहेको माथेमा सामाजिक गूठी, महिला समूह परिवार तथा मिरा माथेमाप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरे । उक्त शिबिरमा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.सुशीला बैद्य र डा. सबिता पौडेलले स्वास्थ्य परिक्षण गरेका थिए । शिबिरमा २५५ जना महिलाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा संस्थाका महासचिव बिमल कुमार होडाले संस्थाबाट यस किसिमको कार्यक्रम लाई अझ बृहत रूपमा लाने बताउनु भयो । नेपाल अर्वुद रोग निवारण संस्था ललितपुर शाखाका सचिब केदार कार्कीले ललितपुर शाखाको आफ्नै भवन लगनखेलमा क्यान्सर डाईनिस्टिक सेन्टर संन्चालनमा ल्याउने बताए । उक्त कार्यक्रममा माथेमा समाज गूठीका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
Posted on February 8, 2019 February 8, 2019 Author Real Pati Author
वाग्मती सफाइ महाअभियानलाई वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगर्तको वातावरण विभागले वाग्मती सफाइ महाअभियानका अभियन्तालाई सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । । नेपाल स्वच्छता […]
Posted on May 28, 2019 May 28, 2019 Author real pati
डा. इशा ढुंगाना श्रेष्ठ स्नायु रोग विशेषज्ञ आफैले राखेको सामान एकछिनपछि कहाँ राखियो, बिर्सियो, कहिँ जान निस्किएको बाटो बिर्सने, एकैछिन […]